owuwu na ndozi | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akụrụngwa: iwu na ịrụzi
Ọ ga-ekwe omume ịtụfu ihe mkpofu n'ime ihe nchekwa?
Ọ ga-ekwe omume ịtụfu ihe mkpofu n'ime ihe nchekwa? ma gịnị mere na enwere ụdị ahụ pụrụ iche nke ịkwọ ụgbọala? Achọghị m ka m wuo ihe mkpofu, eh? A na-ewepụkwa ihe oriri n'efu ...
Kedu ihe jikọrọ ya na ngwongwo nke ngwụcha (akwụkwọ ngebichi, tile, panels, ...) mgbe a rụchara ya?
Kedu ihe ga - eme na ihe ndị fọdụrụnụ (akwụkwọ ahụaja, taịl, ogwe, ...) mgbe mmezi? A naghị ejikarị ha n'ụzọ ọ bụla, mana echekwara ya ma ọ bụrụ na ọ ga-emebi ihe ịchọ mma ahụ emechara. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere otu taịl fọdụrụ ...
Kedu ihe niche dị na mgbidi maka akwa?
Kedu ihe niche dị na mgbidi maka akwa? A na-akpọ niche a dị ka ọnụ ọgụgụ; Niche a na-eme kpọmkwem maka ihe ndina bụ, site n'ụzọ, mmepụta ihe dị mfe ma dị irè. A na-akpọ niche na mgbidi maka ihe ndina ahụ mmanya.
Esi esi bia na 3D?
Esi esi bia na 3D? Nke a ga-eme site na ọkachamara. 2. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ihe niile n'onwe gị, zoo ihe gbasara 1 ihe. A pụkwara ịgwọ onwe gị onwe gị, ma n'ihi ihe ụfọdụ ha na-agba ọsọ na ...
Kedu ihe analogues nke simenti? Ihe ntinye?
Kedu ihe bụ analogues nke ciment? Ndị na-eri nri? Ndị nọchiri simenti - gypsum ụlọ (alabaster), cimnesia, iko mmiri, n’obere astringents. A na-eji ihe ndị a eme ihe maka imepụta ihe eji arụ ụlọ: ngwakọta ụlọ pụrụ iche (putties, plasters), drywall, ...
Kedu ka esi lelee ụlọ ọhụrụ?
Kedu ka esi lelee ụlọ ọhụrụ? Ee, ị pụghị ikpebi ha, ọ bụrụ na ị bụghị ọkachamara, mgbe ahụ, ha na-ezo. Ọ bụrụ na ha bụ, mgbe ahụ ha ga-apụta nke nta nke nta, ma eleghị anya ọ bụghị ...
Kedu otu esi ahuta igwe euro?
Kedu otu esi ahuta igwe euro? O nwere ike ịchọta ihe ndị ọzọ na-eme ka ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta ya.
Kedu ka esi esi mee ka mmiri si na mmiri na-ere mmiri na atlantic?
Kedu ka esi esi mee ka mmiri si na mmiri na-ere mmiri na atlantic? Mmiri kwesịrị ịgbapụta site na mmiri ọkụ. Mechie mmiri oyi na-ekpuchi n'ihu igwe ọkụ. Mepee kpoo ọkụ na faucets, mgbe mmiri na-asọ, mechie kpatụ. Gbanyụọ valve, ...
Kedu otu esi mụta ịrụzi kọmputa n'onwe gị?
Kedu otu esi mụta ịrụzi kọmputa n'onwe gị? Ọ kachasị mma ka gị na onye maara ihe nwee enyi ma ji nwayọọ nwayọọ na-abanye n'ime ụzọ aghụghọ. Mbụ ị ga-achọ ịmụta otú ị ga-esi dozie nsogbu ọ bụla. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na i nwere ihe ọmụma (ma ọ bụ ...
Ọ ga-ekwe omume ịtọ ụra n'elu ụlọ ala ochie ahụ?
Ọ ga-ekwe omume ịtọ ụra n'elu ụlọ ala ochie ahụ? Ị nwere ike ịdakwasị n'elu ochie, ma ọ bụrụ na enweghị bloating, dampness na ebu. Ngwongwo ala nwere ike ibu, ma o di mma ichebe nzuko, enweghi oke di iche iche, ya mere ...
Kedu ihe ka mma ma ọ bụ nyocha?
Kedu ihe ka mma ma ọ bụ nyocha? Ndewo onye dere akwụkwọ a. Ka anyị malite n'eziokwu ahụ na n'ime foto ndị ị na-edozi naanị kposara. Nkwenye adịghị n'ebe ahụ. Nkwenye yiri nke a. Ugbu a laghachi na ...
Windo kpuru ìsì - gịnị ka ọ bụ?
Windo kpuru ìsì - gịnị ka ọ bụ? Window bụ windo nwere uhere, windo na-emeghe, n'ihi na ọkụ na ikuku nke ụlọ ahụ, windo kpuru ìsì bụ ihe dị mma na mgbidi ahụ, na-e aomi windo enyo site na ihe eji arụ ọrụ.
Kedu ihe dị iche n'agbata ịgbado ọkụ na mgbatị?
Kedu ihe dị iche n'etiti ịgbado ọkụ na ịgbado azụ? Eldgbado ọkụ bụ njikọ mebere akụkụ nke akụkụ ahụ, site na kpo oku na nkwonkwo ahụ na-agbaze mmiri nke igwe, na-esote ntinye nke ihe dị n'ime weld, nke a na-ekpokwa ọkụ ...
Kedu ihe ị nwere ike ịkụgharị kwa ụbọchị nke 2 maka otu afọ?
Kedu ihe ị nwere ike ịkụgharị kwa ụbọchị nke 2 maka otu afọ? Ma eleghị anya, ụbọchị izu ike nke onye agbata obi na-ekwu okwu; Na-eje ije n'enweghị nchegharị maka ịkụ ala, drummed the ladle behind his ear in a empty pot, na-ekwu, sị: ...
Kedu ihe ọgụgụ mbụ nke mita mmiri mgbe ị na-azụ?
Kedu ihe ọgụgụ mbụ nke mita mmiri mgbe ị na-azụ? Echegbula banyere nke a. Ihe nnabata a ga-abanye n'ime nkwekọrịta ahụ n'aka onye nwe ụlọ ga-etinye akara ahụ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịnweta ya niile ...
N’ebe a na-ewu ihe bu odika odi ka ohu?
N’ebe a na-ewu ihe bu odika odi ka ohu? Ohu na onye ọrụ abụla klaasị dị iche iche. A naghị akwụ ohu ahụ ụgwọ, ọ na-arụ ọrụ ka e nye ya nri. Onye ọrụ ahụ na-enweta ụgwọ maka nke…
Kedu otu esi hazie onye na-ese ọrụ n'ebe obibi?
Kedu otu esi hazie onye na-ese ọrụ n'ebe obibi? Na ihe na-arụ ọrụ? Ọ bụrụ na mmanụ .. mgbe ahụ zụta akwụkwọ ọgụgụ. N'ime ya ihe niile dị mkpa. Ọ bụrụ na ọrụ ahụ abụghị nnukwu usoro, ị nwere ike iji sketchbook ...
Kedu agba dị ka korota: ojii ma ọ bụ isi awọ - gịnị kpatara ya?
Kedu agba dị ka korota: ojii ma ọ bụ isi awọ - gịnị kpatara ya? Asphalt nwere okwute ma ọ bụ gravel, aja na bitumen. Bitumen na-abụkarị oji ma ọ bụ agba ọchịchịrị, yabụ, na usoro, asphalt kwesịrị ịbụ oji…
Kedu ka esi malite ịrụzi n'ime ụlọ maka ịme onwe gị?
Etu ị ga-esi rụzigharị ụlọ maka ịchọ mma? Ndozigharị nkịtị na-amalite site na atụmatụ na atụmatụ - ihe ị ga-ebido ime, ma anyị ga-agbanwe pipụ, ihe anyị ga-amalite ime, ma anyị ga-agbanwe ...
Kedu esi gbanwere nchara na ịsa ahụ?
Kedu esi gbanwere nchara na ịsa ahụ? Ọ bụrụ na ị nwere mmiri nke na-asọpụta n'okpuru tube nchara, ọ ga-eme ka m nwee nsogbu; N'ime roba tube a gbajiri ebe a na-ejikọta ya na mixer. Iji ebipụ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,363.